ဒီvideo လေးတွေကသားလေး ၃လသားတုန်းက မနက်မိုးလင်းအိပ်ယာထကို ရိုက်ထားတာ။
ဟင် မားမား လက်ထဲ ကဘာကြီးလဲ။
Posted by JuneOne at 10:52 AM
မဇနိ February 5, 2009 at 12:36 PM
အယ် ပုကျူကျူလေးက ချစ်စရာလေး။ အိပ်ယာထ သမ်းနေသေးတယ်။ တွန့်လိမ်လို့။ မျက်လုံးလည်း မပွင့်ဘူး။ အိပ်ယာနိုးရင် တွန့်လိမ်ပြီး မျက်လုံးမပွင့်သေးတာ မဇနိနဲ့တူတယ်။
sin dan lar February 5, 2009 at 1:08 PM
ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ ... တကယ်ပဲ...
သူ့ခမျာလည်း ၃ လသားကတည်းက ရုန်းရ၊ကန်ရတယ်နော်....။
တ်ို့တွေ တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပါ....။
Anonymous February 5, 2009 at 2:16 PM
မာမားကြောင့် သားသား အခုအရွယ်ထဲက မော်ဒယ်လ်ဖြစ်နေပြီကွ။
nu-san February 5, 2009 at 8:40 PM
သားသားက ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်... အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့.. အိပ်ယာထရင် မငိုတတ်တဲ့ သားသားဖြစ်ရမယ်.. :)
ပုံရိပ် February 6, 2009 at 9:31 AM
သားလေးက ချစ်စရာ။ ကြည့်ရတာ အေးဆေးပဲ။
ခင်မင်းဇော် March 9, 2009 at 11:03 PM
ခုမှ ဒီဗွီဒီယို ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အိပ်ယာထမငိုတတ်တာ အကျင့်ကောင်းလေးပေါ့။ နောက် သားလေးက ဒီလောက်ချစ်ဖို့ ကောင်းတာ ပဲ ဒေါင်းမျိုးလေးအစစ်ပေါ့ကွယ်။ ကိုယ့်ငါးချဉ်လေးက တကယ့်ကို ကောင်းလွန်းလို့ ချဉ်ပြရတာမဟုတ်လားကွယ်.. တကယ့်ကို ချစ်စရာသားလေးပါ။
RIT မှ PTU သို့
#မမ အတွက် ဒီသီချင်း
#NTU Medical Centre မှအမှတ်တရ
တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်ပြောလာကြတဲ့ “ပိုးဖူးဖော” Group 💜💜 - 🌺ပိုးမမှီသာ🌺 ပိုး က အရမ်းတည်ငြိမ်တယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နေတတ်ကြတယ်။ သူ့ရဲ့ နှာခေါင်းလေးကို သဘောကျတယ်။ ဆရာဝန်မလေးပီပီ တစ်ခုခုဆို အရမ်းတိကျတယ်။ အစားပု...
တရားမ၀င်ရောက်နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေ ထိန်းသိမ်းခြင်းမပြုဖို့ ထိုင်းအစိုးရ သဘောတူ - မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။ ထိုင်းနိုင်ငံကို တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသူတွေကို လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး အချုပ်ခန်းမှာ ထိန်းသိမ်းထားစဉ်။ ၂၀၁၃။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတွင်း ထိန်း...
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) - သမ္မတကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေဖန်ခြင်း - *ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) - သမ္မတကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေဖန်ခြင်း* *ဒီမိုကရေစီစနစ်များ ကျဆုံးခြင်းအကြောင်းများ – အခန်းဆက် ၂၃ * *(မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁...
"လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး" - #MWDHealthTalkProgramme ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. MWD: မင်္ဂလာပါဆရာ.. အခုလို သာယာလှပတဲ့ မနက်ခင်းလေးမှာ ကျန်းမာရေးလိုက်စားကြသူတွေအနေနဲ့လမ်းလျှောက်ကြတာတွေ...
Nick Sandmann: Covington Boy Intimidated By Red Indian - (Staff articles from The CDN & MILNE NEWS on 20 January 2019.) Covington teens incite internet outrage, but is it justified? The facts and video evidence ...